မော်လမြိုင်၊ မေ ၂၇
ရေးမြို့နယ်၊ အောင်သပြေ-နှစ်ကရင်လမ်း ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းကို တင်ဒါမခေါ်ပဲ Southem Myanmar Development Co,Ltd. (SMD) ကုမ္ပဏီကို လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုခဲ့သည်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေဖြင့် စိစစ်သင့်ကြောင်း မေလ ၂၇ ရက်နေ့စွဲဖြင့် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) မှ သဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါလမ်းသည် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ (၆)လပတ်ရန်ပုံငွေဖြင့် ငွေကျပ်သန်းတစ်ထောင်အသုံးပြုပြီး တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းမရှိဘဲ ယင်း SMD ကုမ္ပဏီကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ယင်းကိစ္စကို တစ်စုံတစ်ရာ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲ အချိန်ဆွဲကာ ဖုံးကွယ်ထားခြင်းသည် လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရအကြား ပွတ်တိုက်မှု ပိုမိုပြင်းထန်လာစေနိုင်ပြီး ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်အရ မဏ္ဍိုင်နှစ်ရပ်ကြား အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းမှု အားနည်းသွားစေမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါပါတီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပြသနာတစ်ခုကို အချိန်ဆွဲနေမည်ဆိုပါက လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရကြား အပြန်အလှန်ပွတ်တိုက်မှု များလာပြီး အပြန်ထိန်းကျောင်းမှု အားနည်းမည်ကို စိုးရိမ်သည့် အတွက် ကြောင့် စာထုတ်ရခြင်းဖြစ် ကြောင်း မွန်ညီညွှတ်ရေးပါတီ တည်ထောင်သူ ခေါင်းဆောင် များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည့် နိုင်လယီတမကဆိုသည်။
“ မေးခွန်းအပေါ် အချေအတင်ဆွေးနွေးကြတယ် သို့သော်လည်းပဲ ဆွေးနွေးချက်နဲ့ပဲ ပြီးသွားတယ် ရှေ့ဆက် ဘယ်လို ကိုင်ကွယ်မလဲဆိုတာ ထင်သာမြင်သာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကြားရသေးဘူး” ဟု နိုင်လယီတမက ပြောသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်း အဝေးတွင် လွှတ်တော် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးမှ အောင်သပြေ-နှစ်ကရင်လမ်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ Southem Myanmar Development Co,Ltd. (SMD) လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ရာတွင် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ရှိ/မရှိကို မေးခွန်းမေးမြန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ဆောင်ရွက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မတွေ့ရှိရပေ။
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်လည်း အောင်သပြေ-နှစ်ကရင်လမ်းအတွက် ဘတ်ဂျတ် ကျန်းသန်း ၇၅၇ ကို လျာထားချက်ဘတ်ဂျတ်အဖြစ် အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။
ယခင်ဆောင်းပါးလမိုင်းမြို့က ငွေကြေး အဓိကရိုဏ်း
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးစတန်းလီ၏ မန်နေဂျာဟောင်း ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုဖြင့် အဖမ်းခံရ